गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन ! – Sandesh Press
गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन !
January 4, 2021 97
मी तपाईको मेहनत त्यसै खेर जानुहँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । त्यसैले सफलताको कामनासहित जीवनलाई कसरी सफल बनाउने भनेर हामीले दशवटा सुत्रहरु प्रस्तुत गरेका छौँ । यी सुत्रहरुको प्रयोगले तपाईको जीवन साच्चै नै सफल हुनेछ ।
Prevअक्षय कुमार आफ्नो छोरीको अनुहार किन लुकाउन चाहन्छन्, खुल्यो यस्तो रहस्य
दोहोरी च्याम्पियन विवादमा राजु परियारको आ,क्रोश